Mogadishu Journal » Kooxda Napoli ayaa diiday in ay safraan
Kooxda Napoli ayaa diiday in ay safraan
Napoli uma aysan safrin Turin kulankoodii Juventus sababo la xiriira walaaca coronavirus.
Juventus ayaa u muuqata inay u muuqato in la siin doono guul 3-0 ah oo ay ka gaarto Napoli ka dib markii ciyaarta aan lagu bilaabin sidii loo qorsheeyay madaama kooxda Gennaro Gattuso aysan u safrin Turin kulankii axada ee Serie A.
Napoli ayaa lagula taliyay inaysan u safrin maamulka caafimaadka ee deegaanka ka dib markii Piotr Zielinski, Eljif Elmas iyo xubin ka tirsan shaqaalaha Giandomenico Costi laga helay COVID-19.
Juve qudheeda waxay soo tabisay labo kiis oo wanaagsan oo shaqaalaha ka mid ah sabtidii - iyagoo shaaca ka qaaday in kooxdooda ay go'doomin ka keeneen natiijada - laakiin markii dambe waxay sii daayeen bayaan ay ku xaqiijinayaan inay damacsan yihiin inay ciyaaraan ciyaarta.
Si kastaba ha noqotee, afar saac ka hor waqtiga loo qorsheeyay Axadda, Serie A ayaa diiday codsigii rasmiga ahaa ee Napoli ee ahaa in ciyaarta dib loo dhigo, maaddaama kooxda - oo sidoo kale xaqiijisay Gattuso aan laga helin wax laga helay coronavirus, in kasta oo ay jiraan warar xan ka duwan - farsamo ahaan ugu yaraan 13 ciyaartoy ayaa diyaar ah.
Inta badan Safaaradaha Soomaaliya oo Qarka u saaran in ay xirmaan iyo Sababta keentay (Cadeymo)
Dagaal dhiig badan ku daatay oo dhax maray Ciidamo Soomaali iyo Liibiyaan ah